AngularJS - Saturngod
ပြီးခဲ့တဲ့ တနင်္ဂနွေနေ့က ကျောင်းက သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ တွေ့ပြီး စကားပြောတုန်း အခု လက်ရှိ Angular နဲ့ ရေးနေတယ်လို့ ဆိုတယ်။ ဒါနဲ့ ဘယ်လို နေလဲ ဆိုတော့ မိုက်တယ် လို့ ပြောတယ်။ CodeSchool မှာလည်း လေ့လာလို့ ရတယ်။ Google က Sponsor ပေးထားပြီး free course ပါ။ CodeSchool မှာကတော့ တကယ့်ကို အခြေခံပဲ သင်တယ်။ Angular က version 0.9 ကနေ 0.10 လောက်ထိ သုံးဖူးတယ်။ documentation မရှိတာကြောင့် လေ့လာဖို့ ခက်တယ်။ ဘာတွေ လုပ်လို့ လုပ်လို့ ရမှန်း မသိဘူး။ ဒါနဲ့ မလေ့လာဖြစ်ခဲ့ဘူး။
တနင်္လာနေ့ ညမှ ပြန်ပြီး Angular JS ကို ကြည့်ဖြစ်တယ်။ တခါတည်း codeschool course တက်။ မနေ့က course ပြီးသွားတော့ App လေး တစ်ခု စမ်းရေးကြည့်။ ၁ ရက် အတွင်းမှာ App က လိုချင်တဲ့ ပုံစံ အတိုင်းရသွားတယ်။ CodeSchool မှာ EmberJS ကို လည်း တက်ခဲ့ဖူးတယ်။ EmberJS ကို တက်ပြီး နည်းနည်းလေး သိပေမယ့် လက်တွေ့ App တစ်ခု ရေးကြည့်ရာမှာ အတော်လေးကို နားလည် ရခက်နေတယ်။
EmberJS နဲ့ AngularJS မှာ ကျွန်တော့် အတွက် AngularJS က ပိုလွယ်တယ်။ EmberJS က app နဲ့ ပိုတူပြီး ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ တည်ဆောက်ပုံ ရှိတယ်။ အဲဒါကြောင့်ပဲ ကျွန်တော့် ကို ရေးရတာ ပိုရှုပ်ထွေးစေတာလား တော့ မသိဘူး။ နောက်ပြီး view အနေနဲ့ သီးသန့် ရှိပြီးတော့ handlebar ကို အသုံးပြုထားပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ index.html ထဲမှာပဲ templaet တွေ အများကြီးထည့်ထားတာကို တော့ သိပ်ပြီး သဘောမကျဘူး။ External handlebar ကို လုပ်လို့ ရပေမယ့် နည်းနည်းတော့ ရှုပ်တယ်။ Handlebar က app တစ်ခုကို တည်ဆောက်ရာနဲ့ တူတယ် လို့ ကျွန်တော်ကတော့ မြင်မိတယ်။
AngularJS ကို လေ့လာမယ်ဆိုရင် ပထမဆုံး http://campus.codeschool.com/courses/shaping-up-with-angular-js/ ကို သွားပြီး course ပြီးအောင် တက်လိုက်ပါ။ ပြီးမှ Angular JS မှာ ပြောထားတဲ့ Tutorial ကို စမ်းကြည့်ပါ။ ကျွန်တော်ကတော့ သူ့ရဲ့ tutorial ကို သိပ်မကြိုက်လှဘူး။ ရှုပ်ထွေးတယ်လို့ ခံစားရတယ်။ နောက်ပြီးhttp://code.tutsplus.com/ က tutorial တွေကနေ တဆင့် လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
« Language , framework ? it doesn’t matter Myanmar Local in iOS 8 »
Naing Lin Aung (@kelvinm0rRis) says:
not only ionic, but also onsen ui used angular directive. but angular directive might be crash with polymer elements. I wish both projects will merge in the future. For now, I heard of Angular.js will support polymer
Language , framework ? it doesn't matter